Beaded meatballs mu bacon Art sens - mazano eimba nebindu
Yakavharwa mabhebhi enenyama mune bacon
16.04.2016 Yakatumirwa na: Art Sense
Pfungwa inonakidza uye yakapusa-kugadzirira hanyanisi uye bacon nyama yebhasiketi nzira. Iyi nzira yekutanga inobvumirawo misiyano mizhinji mukuravira uye zvigadzirwa, pamwe nenzira yekurapa kupisa. Muchiitiko ichi, nyama ine minced inoshandiswa, asi iyo yakarongedza inogona kuve miriwo kana yakasanganiswa. Pane akawanda emikana inogona kuitika kana paine kukurudzira uye chishuvo chezvemhando dzekuedza.
Misoro mishoma yekutenderera yeanyezi ekare
Mushrooms uye parsley
Munyu, mhiripiri uye kumini kuravira
BBQ sosi - yakagadzirira kana imba yakagadzirwa
Anyezi anodiwa kuti ave epakati svikiro, sezvo saizi yavo ichisarudza dhayamita yemabhokisi enyama. Onion imwe neimwe inotemwa nepakati, ikazevesa kubva pane imwe neimwe chikamu, uye mapepa ega maviri akaiswa zvakasiyana. Ive nekuchengera kuchengetedza kutendeseka kwemaflakes, sezvo ivo vachazove iro ganda remakoko. Kana uchida, unogona kudzika anyanisi marata mune zvishoma wakakanyungudzwa mvura ine munyu uye shuga. Madiki madiki kubva kuonion core anogona kuchekwa uye kupiswa kana kuiswa padivi. Ravira iyo mince, zvakare wedzera yakakanyiwa mushwa uye parsley, uye imwe sarupu sosi. Kana iwe uine kuravira kwekuda kwemasosi akagadzirwa-akagadzirwa kubva kune chaiwo ma brand unogona kushandisa imwe, asi iwe unogona zvakare kugadzira yako kana uchida.
Zvinonhuwirira barbecue svutugadzike inowanikwa nekuvhenganiswa yakakangwa nechero brown shuwa (kusvikira yakagadziriswa) yakatemwa kana kusvinwa hanyanisi uye hirizi, kune iyo nyanya nyanya yekubika, uchi, haradharu, mandimu, sosi sosi, tabasco (inopisa mchero) inowedzerwa. , dema pepani uye munyu, uye musanganiswa uyu unokanywa kune wakaomeswa waunoda.
Kubva pane rakakanyiwa mince, mabhora anoumbwa, akaiswa pakati pehafu hanyanisi hanyanisi uye akaputirwa bacon mitsetse uye wozogadziriswa nemazino. Iwo mabhebhu enyama adaro anowanikwa anosaswa nebaruki sosi uye ndokusiiwa kweinenge hafu yeawa, obva abikwa mune grill kana mupani yakazorwa nemvura.
artistic anyezi recipe, pfungwa, pfungwa yeboka renyama, mince, mince nehanyanisi uye bacon, mabhebhi, mabarobbheri mu anyanisi, mabhebhi enhumbu, hanyanisi mu bacon, anyezi recipe, beaded yenyama, bacon recipe, minced nyama recipe, anyezi recipe, mapikicha, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Kana uchisarudza fenicha yekushambidzira yemazuva ano, pane zvisingabvumirwe mikana ye ...
Kuvaka masheji mubindu kana imwe nzvimbo yakavhurika iri nyore, asi zvakare kunoteerera ..
Inonaka Zuva reValentine
Iyi ndiyo pfungwa yekeke rinonaka-rakagadzirwa keke rinogona kushamisa mudiwa wako ...
Koshongedza iyo diki turu
Ngatisatarisa mudiki diki sekusanakisa kweimba yedu! Uye kunyangwe tichifunga ...
Meatloaf - yehoridhe neupfu
Nyama Svondo izuva rekupedzisira kuti nyama inodyiwa isati yatanga mazororo eIsita. Kupemberera ...
Wall remadziro emawindo akare
Nzira yekufema sei hupenyu hwepiri kuita yekare huni nekuishandura kuita madziro ...